Iindaba -U-Lianteng uqeqesha inkcubeko yabasebenzi kubasebenzi
U-Lianteng uqeqesha inkcubeko yabasebenzi kubasebenzi
Oko yasekwa ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo, umatshini wokupakisha weLianteng akajonganga kuphela kuphuhliso nakwimveliso yokupakisha oomatshini abohlukeneyo, kodwa ikwaqwalasele ukomeleza ukuqonda kwenkcubeko yabasebenzi.
U-Lianteng ebesoloko enyanzelisa ukuba ukujolisa ebantwini yeyona nto iphambili kwimveliso, ayisiyiyo kuphela ishishini eliphambili, kodwa ikwangumbindi wolawulo lweshishini. Ikwayinto ehambelana nenkcubeko yekhaya elifudumeleyo, elibeka abantu kwindawo yokuqala yolawulo lweshishini.Ukugxila kumbono wokusebenzela abasebenzi ngentliziyo iphela, inkampani yenza umsebenzi wokwakha inkcubeko, izama ukudala imeko yenkcubeko egcwele ubungqongqo bangaphakathi, ubumbano olomeleleyo, kunye nokuphumelela kwabathengi 'kunye nenkxaso ngaphandle.
Kwangelo xesha, uLianteng ugxininisa ubunzulu bokwakhiwa komgangatho wenkampani yethu.Umgangatho "ngumthetho" weshishini, yonke imisebenzi yeshishini kufuneka yenziwe ngaphakathi komgangatho, "umgangatho wokuqala, umphathi jikelele okwesibini "Phambi kokuba wonke umntu alingane" Ukuphuhliswa kusekwe iseti yemigangatho yesayensi kunye nengqiqo yokulawula ishishini, ukubeka emgangathweni indlela yokuziphatha kwabasebenzi, oku kufanelekile ekuqinisekiseni ukukhula kwexesha elide kunye nokuzinza kweshishini.
Inqaku lokugqibela lenkcubeko yobumbano kukuphuhlisa ishishini ngomgangatho. U-Lianteng uyavuma ukuba umgangatho bubomi beshishini kwaye imveliso imele umlinganiswa.Abantu abacingi ngendlela yokujamelana nokoyisa abo bachasayo. "Abantu bakholelwa ukuba kuqoqosho lwentengiso, abo bakhuphisana nabo baya kuhlala bekho, ulawulo olufanelekileyo kuphela, ukuphucula umxholo wetekhnoloji yemveliso ngoyena ndoqo wokulawula imarike. Inkampani yeLianteng ihlala ithobela umgaqo-nkqubo osemgangathweni" wokubonelela ngeempahla ezikumgangatho ophezulu eluntwini ", Izama ukusinda ngomgangatho, izabalazela ukukhula ngokwedumela, kwaye inyusa rhoqo utyalo-mali kutshintsho lwetekhnoloji kunye nophando lwemveliso kunye nophuhliso. Cinga ngomgangatho njengokuphila kweshishini. Ilitye lembombo lophuhliso kunye nesitshixo segolide.
Ndiyakholelwa ukuba okoko nje sihlala sihambelana nenkcubeko yequmrhu, uLianteng uya kuba nakho ukwenza oomatshini bokupakisha abangcono, kwaye azise iinkonzo ezigqibeleleyo kubathengi bethu.